ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ရင်ထဲကရွှေနိုင်ငံ (၂)
ကျောလယ်ကိုချထားတဲ့ ကိုယ့်ဆံပင်ကိုယ်ကြည့်ပြီး အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို သွားသတိရမိပြန်တယ်.. ရန်ကုန်မှာ ဆင်းရဲသောမိန်းကလေးများ ဂတုံးသာသာပဲရှိတော့တယ်တဲ့. ကြားရတာ စိတ်တောင်မချမ်းသာဘူး.. မိမိကိုယ်မှာရှိသော မိန်းကလေးများအတွက် အလှကျက်သရေရှိသော ဆံပင်တောင်ဖြတ်ရောင်းပြီး ၀မ်းရေးအတွက် အသက်ဆက်နေရတယ်ဆိုသော သတင်းများကိုကြားလိုက်ရချိန်မှာ ကျေးဇူးကြီးမားလှသော ဘဘဘုရား သန်းရွှေတို့ကို နုတ်နုတ်ပါစင်းချင်မိတယ်.. သူတို့အမေ ၊ သူတို့မိန်းမတွေသာ ဂတုံးဆို သူတို့ဘယ်လိုနေမှာလည်း……
ထမင်းရည်တောင် ၅ကျပ် ၁၀ကျပ်နဲ့ဝယ်သောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ပဲခူးဘက်က အသိတွေစကားက ကျောပါချမ်းသွားတယ်.. လင်းလက်ကြားဖူးခဲ့တာက ထမင်းရည်ဆိုတာ အ၇င်က နယ်တွေဘက်မှာ နေ့လည်ခင်းဆို ၀က်မွေးထားတဲ့အိမ်တွေက ပုံးတွေနဲ့လာတောင်းတယ်.. အိမ်ကလူတွေကပေးလိုက်တယ်. ၀က်တွေသောက်တာပါ…. အခု နိုင်ငံက ချမ်းသာလား မချမ်းသာလား လူတွေပါ ထမင်းရည်သောက်နေရတယ်တဲ့… သြော်ဒါလား ရန်ကုန်မှာ လမ်းသွားရင် ထောင်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ` ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံသစ်စီသို့´တဲ့ …….. ခေတ်မီတယ်သာဆိုတယ် နိုင်ငံကစုတ်ပြတ် ၊ သီချင်းထဲကလို အမျိုးသမီးကောင်းတွေက ကြက် ကြက် ကြက် ဖြစ်နေပြီ…..
တစ်ခါတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က လယ်သမားတွေနဲ့ စကားဝိုင်းပွဲလုပ်တော့ စာပေမတတ်တဲ့ လယ်သမားကြီးက ထပြောပုံက ` ဗိုလ်ကြီးတို့ကမှ ဟိုလူက လာပေး ဒီလူကလာပေး ချမ်းသာသေးတယ်။ ကျူပ်တို့က ထမင်းတောင်မ၀ပါဘူး´တဲ့… ရီလိုက်ရတာ အူတွေပါလှိမ့်တယ်..
ပြည်သူတွေထဲက အဆီအနှစ်ကိုထုတ် ၊ လက်နက်နဲ့ခြိမ်းခြောက် ၊ ပြည်သူထမင်းအိုးကိုခွဲနေသာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလည်း ညခင်းအိပ်ရင် အိပ်တောင်ပျော်ရဲ့လားမသိ.. ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘက်မှာ တုတ်တွေ ဒါးတွေနဲ့ လာတိုက်ခိုက်သူများကို ပြန်လည်ခုခံမယ်ဆိုပြီး စောင့်နေတဲ့ သူတို့တပ်ဖွဲ့သားတွေကိုလည်း ရီချင်ပါတယ်.. သူတို့လိုလူတွေကို ဘယ်သူမှကျည်ဆံအကုန်ခံလာမတိုက်ဘူး.. ကျည်ဆံတစ်တောင့်က သူတို့အသက်ထက်ပိုဈေးကြီးတယ်…. တစ်ယောက်တစ်ချက်သာ ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ ၀ိုင်းဆော်ပစ်လိုက်ရင် ပွဲသိမ်းရော…
thiha zaw said...
I thought some ifo at there was not correct. I left yangon last year and I admit that country economy still coming down (my be worst) but condition are not like that posted in this blog. A sort of pessimism and "Bay htai bu pyaw" is nothing better for our country cause it is easier said than done.... by thiha(zaw.thiha@yahoo.com)
i don't agree with you thiha zaw.
i think u just knew abt yangon.
hay come on lin let kyel zin
go ahead.i know u r just what u belive.
i can see your honest in your post.